Hlola iFrankfurt, eJalimane - World Tourism Portal
Hlola iFrankfurt, eJalimane
Yini ukubona. Izindawo zokudlela ezihamba phambili ezihamba phambili eFrankfurt, eJalimane
Yini okufanele uyenze eFrankfurt, eJalimane
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha yeFrankfurt
Bukela ividiyo ekhuluma ngoFrankfurt
Hlola iFrankfurt okuyisikhungo sebhizinisi nezezimali Germany nedolobha elikhulu kunazo zonke ezweni laseJalimane iHesse. Leli dolobha laziwa ngesibhakabhaka sakhona esizayo kanye nesikhumulo sezindiza esiphambili saseJalimane.
Itholakala emfuleni i-Main, iFrankfurt inhlokodolobha yezimali ye-Continental Europe kanye nesikhungo sezokuthutha eJalimane. IFrankfurt yikhaya le-European Central Bank kanye neJalimane Stock Exchange. Ngaphezu kwalokho, ibamba eminye yemibukiso ebaluleke kakhulu yezohwebo emhlabeni, njengeFrankfurt Auto Show neFrankfurt Book Fair.
IFrankfurt idolobha elihlukile. Amabhange acebile, abafundi kanye ne-granola eyehla yenyuka edolobheni enezinye zezindawo eziphakeme kakhulu, ezisezingeni eliphezulu kakhulu zase-Europe eduze kwezakhiwo ezindala ezinakekelwa kahle. Isikhungo sedolobha, ikakhulukazi isikwele seRömer, isimo samasiko neminyuziyamu eseMfu Main, kudonsa izigidi zezivakashi minyaka yonke. Ngakolunye uhlangothi, abaningi basuka ezindaweni ezishaywayo, njengeBockenheim, iBornheim, Nordend kanye neSachsenhausen, ngezitaladi zabo ezihle ze19th zeminyaka namapaki zivame ukunganakwa yizivakashi.
IFrankfurt yindawo lapho i-Autobahns enkulu nojantshi bezitimela behlangana khona. Cishe abantu be-350,000 bangena edolobheni nsuku zonke, ngaphezu kwabantu be-710,000 abahlala lapha. Isikhumulo sezindiza esikhulu - esesithathu ngobukhulu eYurophu - yisango eliya eJalimane futhi kubantu abaningi iphuzu lokuqala lokufika eYurophu. Ngaphezu kwalokho, kuyindawo ehamba phambili yokuxhumana ngaphakathi kweYurophu nezindiza ezindizayo.
IFrankfurt iyidolobha elihluke kakhulu eJalimane futhi linamaphesenti aphakeme kakhulu abantu bokufika kuleli: cishe i-28% (710,000) yezakhamizi zaseFrankfurt ayinalo ipasipoti yaseJalimane kanti enye i-20% izakhamizi zaseJalimane ezingokwemvelo.
IFrankfurt iyikhaya leminyuziyamu eminingi, yaseshashalazini ne-opera esezingeni lomhlaba.
Izikhathi ezinhle kakhulu zeFrankfurt zisekupheleni kwentwasahlobo kuya ekwindla zakuqala. Ihlobo livame ukuba yilanga futhi lifudumele nge-25 ° C (77 ° F). Zilungiselele, kepha, izinsuku ezishisa kakhulu zasehlobo ezungeze i-35 ° C (95 ° F) nemvula elula. Ubusika bungabanda futhi bube nemvula (imvamisa ayibikho ngaphansi kuka--10 ° C / 14 ° F). Akuvamile ukuthi i-Frankfurt uqobo.
Uma uhlose ukulala ubusuku bonke, ungahle ufise ukugwema izikhathi lapho kubanjelwa khona Fairs yezohwebo, ngoba lokhu kuzokwenza ukuthola indawo yokuhlala ebiza kube ngumsebenzi onzima. Okukhulu kakhulu yiFrankfurt Motor Show (Autkidil-Ausstellung) njalo eminyakeni emibili maphakathi no-Septhemba kanye ne-Book Fair (Buchmesse) minyaka yonke maphakathi no-Okthoba.
Bamba iqhaza kwezinye izinkambo zamahhala ezifana neFrankfurt Architectural Photo Tour noma uhambo lokuhamba lwamahhala lwaseFrankfurt
Ehlobo, ukuhamba ngomfula Main kuyinto enhle ukuyenza. Abantu abaningi bazosebenzisa ilanga elingene ntambama behamba noma behleli lapho etshanini noma bedlala iFrisbee noma ibhola. Yindawo ethule uma uyicabanga, isenhliziyweni yedolobha. Amakhekhe aseduzane kanye nezindawo zokudlela akuvumela ukuba uphuze phakathi. Okuwukuphela kwento embi ukuthi ingagcwala uma isimo sezulu sihle; zama ukuhamba ngezikhathi zebhizinisi ngosuku lwesonto ngaphandle kokuthi ufuna isixuku.
Isondlo, iNeue Mainzer Straße 52 - 58. Iba nombono ovusa amadlingozi kusuka kulesi skyscraper.
I-Oper Frankfurt, i-Untermainanlage 11. Ukuze ungadideki nesakhiwo esingumlando se-Alte Oper, lesi sakhiwo sanamuhla kulapho ungabona khona ukusebenza kwe-opera. Ukusebenza okuxhaswe ngumbuso kwenza lokhu kube indawo engabizi kakhulu yokubona imikhiqizo ephezulu.
I-Ice skating rink, i-Am Bornheimer Hang 4. I-Ice skating yama-amateurs noma ubuke imidlalo ye-ice hockey ngamaqembu endawo.
Ithiyetha yesiNgisi, iGallusanlage 7. Bona umdlalo kumdlalo weshashalazi omkhulu wolimi lwesiNgisi emazwenikazi aseYurophu.
Cela ukuhamba ngezinyawo eCity Forest (eStadtwald) eningizimu yeFrankfurt. Njengoba icishe ibe ngamakhilomitha-skwele angama-48, ithathwa njengehlathi elikhulu kunawo wonke wedolobha Germany. Izindawo zokudlala eziyisithupha namachibi ayisishiyagalolunye zenza ihlathi lihehe ngokuthandwa izivakashi.
Zama i-cider yendawo "Apfelwein", ikakhulukazi eyenziwe nguPossmann. Uhlelo lwe- “Frau Rauscher” lunokunambitheka okumnandi kwemvelo kufakwe imvubelo ethile esele kuyo.
I-cinema yaseCinestar Metropolis ikhombisa ama-movie ambalwa esiNgisi.
Iya kubhukuda eTitus-Thermen noma kuRebstockbad. Zombili zinezikhungo zezimbali ezivulekile kanye nezinsimbi ze-sauna. Noma vakashela noma yiziphi ezinye echibini lomphakathi elingaphakathi noma elingaphandle eFrankfurt. Ezinye zezakhiwo ezinkulu ngaphandle kwemingcele yedolobha zibandakanya iTaunus-Therme eBad Homburg naseRhein-Main-Therme eHofheim.
I-Sportpark Kelkheim iyindawo yokukhiqiza yezemidlalo enezifundo eziphezulu zezintambo, igalofu (akukho ubulungu obudingekayo), ukugibela ngaphakathi nokushayisana, squash, neminye imisebenzi.
Iya phezulu kweNtaba yeFeldberg, intaba ephakeme kunazo zonke yeTaunus. Ngena ngaphezulu kombhoshongo wokubheka e-Feldberg. Uma kubanda, yiba noshokolethi oshisayo ngo-ukhilimu (Heiße Schokolade mit Sahne) esitokisini sesakhiwo.
Isifunda esikhanyayo esibomvu esinama-brothels amakhulu, ama-cinema ama-porn movie kanye nemigoqo sitholakala empumalanga yesitimela esikhulu.
Ballet Wiliam Forsythe. I-ballet yesimanje eFrankfurt.
Imikhuba yokuhweba kaFrankfurt kuyaziwa ukuthi yenzeka ekuqaleni konyaka 1160. IMesse Frankfurt ingesinye sezikhungo ezinkulu zemibukiso emhlabeni, ibamba umfudlana oqhubekayo wemibukiso emincane, enkulu ne-gargantuan - iMotor Show idonsela izivakashi ezingaba yisigidi. Iningi lamalungelo livulekele umphakathi okungenani ingxenye yesikhathi, futhi lingaba yinto ehehayo uma kwenzeka ngandlela thile uma unentshisekelo yengqikithi. IMesse inesiteshi sayo sesitimela, iMesse, iziteshi ezimbili kude neCentral Railway Station. Amathikithi okuqhubekisela phambili am fairs ngokuvamile avumela ukusetshenziswa kwamahhala kwazo zonke izithuthi zomphakathi ze-RMV. U4 / U5 ukuze isiteshi iMesse / Torhaus; izitimela eziya emashini wokuhweba zizomenyezelwa ngesiNgisi.
IFrankfurt Book Fair (uFrankfurt Buchmesse). Umcimbi omkhulu kunayo yonke wezimboni zokushicilela emhlabeni, owenziwa minyaka yonke maphakathi no-Okthoba. IFrankfurt Book Fair inomlando omude, okokuqala ibanjwa ngonyaka we-1485, ngemuva nje kokuba umshini wokuphrinta kaGutenberg eNorth Mainz wenze ukuthi izincwadi zitholakale kalula kunakuqala. Izinsuku ezimbili zokugcina (Sa-Su) zivulekele umphakathi jikelele, ngokuthengisa izincwadi kuvunyelwe ngeSonto kuphela. Eminyakeni yamuva, izinsuku zomphakathi zeBhuku Fair zidonsele abalandeli abaningi be-manga / anime, abaningi babo abagqoka njengabalingiswa babo abathandayo! Izithombe zivunyelwe, kepha kuphela ngemuva kokucela imvume.
IFrankfurt Motor Show (I-Internationale Automobil-Ausstellung). Umbukiso wezimoto omkhulu kakhulu emhlabeni kanye nomcimbi omkhulu owenziwa uFrankfurt, owenziwa njalo eminyakeni emibili, olandelayo nge-Sep. 2019. (Eminyakeni ebalwa ngisho nenombolo, lo mbukiso ubanjelwa eHannover.)
IFrankfurt yindawo enhle yokuthenga, ngoba ikhuthaza izivakashi kanye nabantu bendawo, ngakho-ke ungathola noma yini kusukela ekushoneni okuncane kuze kube sezingeni eliphansi, futhi amathuba amaningi okuthenga atholakala phakathi nendawo. Iningi lezitolo livuliwe kuze kube i8PM, noma ezinye izitolo ezinkulu zedolobha elikhulu zingavala e9 noma 10PM. Sekukonke, izitolo zivalwa ngamaSonto.
I-MyZeil (Isikhungo sokuthenga)
I-Zeil ingumgwaqo omkhulu wokuthenga eFrankfurt futhi empeleni ingenye yemigwaqo evame kakhulu ukuyithenga eYurophu. Le ndawo ifaka izitolo zomnyango njengeGaleria Kaufhof neKarstadt, izindawo zokuthenga ezinjengeZeilgalerie neMyZeil (isakhiwo esimangalisayo!) Nezinye izitolo eziningi. Bheka futhi eminye imigwaqo ezungezile, isib. Liebfrauenstraße, Schillerstraße, Kaiserstrasse. Yiya ku-Goethestraße ukuyothenga i-upscale.
IKleinmarkthalle: Ihholo lemakethe elinemikhiqizo yokudla yasendaweni neyamanye amazwe, etholakala eHasengasse 5-7 (enkabeni yedolobha phakathi kweZeil neBerliner Straße)
Schweizer Straße: izitolo ezincane, zendabuko ezinobuchule bendawo.
I-Berger Straße: izitolo ezincane nezindawo zokudlela ezinhle.
INordWestZentrum: inxanxathela enkulu yezitolo yesimanje enyakatho yeFrankfurt. Izitolo eziningi zalapho zingatholakala nasendaweni ephakathi ne-Zeil.
I-Leipziger Straße: izitolo ezincane.
Imakethe yaseFlea: NgeMigqibelo eceleni komfula eSachsenhausen. Kuqala lapho kuzungeze i-10: i-00 bese iyaqhubeka kuze kube yi-14: 00 phakathi nesikhathi lapho umgwaqo uvame ukuvalelwa kuthrafikhi.
IHessen-Center: inxanxathela yezitolo ezindala ibheke kakhulu kubantu bendawo.
Imakethi kaMlimi eKonstablerwache: njalo ngoLwesine (10: 00-20: 00) nangoMgqibelo (8: 00-17: 00)
I-Schillermarkt: Imakethe yokudla yasendaweni, njalo ngoLwesihlanu kusuka 9: 00-18: 30.
Kukhona izindawo zokudlela ezifundwayo kulo lonke laseFrankfurt. Indawo eyodwa ephakeme yokudlela ingaba yilokho okwaziwa ngokuthi yiFressgass (ukuhumusha okungokoqobo kungaba "munching alley"). Igama okuyilo lomgwaqo iGrosse Bockenheimer Strasse. Njengoba igama lesidlaliso lisho, i-Fressgass ifaka amathofi amaningi, indawo yokudlela kanye nezitolo zokudla. Yindawo edumile yokudlela ngemuva kokuthenga kwansuku zonke. Thatha indlela ehamba phambili esiteshini iHauptwache noma i-Alte Oper. Ekupheleni kukaMeyi kuya ekuqaleni kukaJuni (izinsuku eziqondile ziyahlukahluka unyaka nonyaka), iFressgass Fest yenzeka ngokudla okudla, ubhiya oshibhile nomculo obukhoma.
IFrankfurt yidolobha elincane lapho ukuzijabulisa nabantu namaqembu kuhlale kuphakeme ku-ajenda. ISachsenhausen, iBockenheim, iBornheim, Nordend kanye nesikhungo sedolobha kuyizindawo eziphambili zomsebenzi. Isikhungo sedolobha sihlanganisa isifunda esikhanyayo esibomvu esinamandla - sihanjiswa kakhulu ngamaphoyisa nezikhulu zomkhandlu wasekhaya - eduze kwesiteshi esikhulu. Amakilabhu e-Strip afana neGolden Gate Frankfurt ithandwa amaqembu asb bacoror / bachelorette ngempelasonto futhi amalunga afanayo asebangeni lokuhamba. Hlola kuqala intengo ukugwema izinkinga ngama-bouncers kamuva.
Ngenxa yamabhange nabahambi bebhizinisi impilo yasebusuku eFrankfurt ihlukaniswe ngamaqembu aphezulu noma amanye amaqembu abafundi. Ngokuvamile izembatho zokugqoka kumele zibe ngumbhalo ophakeme ngokwedlula isilinganiso samaJalimane - ama-sneaker kungenzeka angamukeleki kwezinye izindawo.
Ngenkathi amaklabhu anezithombe eziphakeme avame ukuvulwa kuze kube amahora asebusuku, imigoqo isondele ngase23: 00-01: 00 kanye namakilabhu amancane e-03: 00-04: 00 phakathi nobusuku bangoMgqibelo. Ukubheja okungcono kakhulu kokwenza ubusuku bonke ubusuku yi-Alt-Sachsenhausen njengoba imigoqo eminingi izovuleleka kuze kuphume ilanga.
I-Alt-Sachsenhausen, ingxenye yesigatshana saseSachsenhausen eningizimu yomfula u-Main, idume ngemigoqo yayo futhi iKneipen (uhlobo lwaseJalimane lweBar) olusebenzisa u-Ebbelwoi (olimini lwendawo olusebenzisa elithi “iwayini le-apula”), kwesinye isikhathi lubizwa ngokuthi i-Ebbelwei) . Kodwa-ke, lezi zinsuku ikakhulukazi izivakashi. Izinketho ezinhle e-Alt-Sachsenhausen yi-Dauth-Schneider, Struwwelpeter kanye neLorsbacher Thal. Enye inketho e-Sachsenhausen kuse-Textorstrasse, uhamba imizuzu emibili ubheke eningizimu, lapho ungathola khona umugqa wezindawo eziyiqiniso ezinikeza abantu bendawo (iJermanania, Kanonensteppel, Feuerraedchen).
Ayidumile njenge- "Alt-Sachs", kodwa yaziwa kakhulu, yiBornheim (etholakala enyakatho) enendawo lapho kwakhiwa khona i-cider-engadini efana ne-Berger Straße 'nendawo ezungezile. Ezinye zezindawo ezidumile zewayini ewayini eBornheim yiSolzer, iZur Sonne neZur Schoenen Muellerin.
Kunamakilabhu amaningi eFrankfurt ahlanganisa abantu bebhizinisi futhi ahlele imicimbi yenkampani.
Kunezindawo eziningi zokudlela ze-inthanethi eFrankfurt zamanani ahlukile nekhwalithi.
I-Wi-Fi yamahhala ezitolo zekhofi iyanda futhi ivame kakhulu kepha amabhizinisi amaningi adinga ukuthenga okuthile njll. Amanye amahhotela ahlukahlukene anikezela ngokufinyelela kwi-Intanethi kepha kuvame ukukhokhiswa.
IPrezz - Ikhaya likaGutenberg eRhini, nedolobha elidala eligcinwe kahle, i-45 min.
I-Wiesbaden, idolobha elicebile lomlando we-spa nedolobha elikhulu.
URüdesheim am Rhein - emaphethelweni aseningizimu weSigodi saseRhine kanye neRheingau, i-73 min.
IDarmstadt - indawo yokuhlala yangaphambilini yombango waseHesse, idolobhana elidala elihle, ubuciko bokwakha nge-nouveau
UMbusi u-Antoninus Pius Ungamela eSangweni LaseSaalburg Main
Bad Homburg - idolobhana elisondelene nenqaba endala yaseRoma iSaalburg esohlwini lwamagugu e-UNESCO
I-Bad Nauheim - izakhiwo nobuciko be-nouveau nendawo lapho u-Elvis Presley ahlala khona ngenkathi eseMkhosini (i-1958-1960)
IHeidelberg, enenqaba edumile nedolobha elihle elidala, i-55 min.
Cologne, ekhaya le-Cologne Carnival nesonto elidumile, ihora le-1
EBüdingen: Isikhungo sedolobha eliphakathi
Uma umagange ngokuhamba ngezinyawo, yiya ezintabeni zaseTaunus eziseduze, iVogelsberg (intaba-mlilo eqothulayo), noma i-Odenwald. Hlola iFrankfurt futhi uzothola ukuthi kunokuthile okunambitheka kwalowo ozihambelayo.